Ivolovolo nzima kakhulu izibopho Manufacturers kunye Suppliers | China Pistol Strain yamasango Factory
High ombane ukumiswa uqinisa iqulunqwa ukuxhasa umqhubi kunye insulators kwimigca zothumelo ezihamba. To qhagamshela intambo amandla yokwambathisa.
Le hardware line amandla isetyenziswa ne AAAC, ACSS, ACSR, iintlobo engenanto zagutyungelwa zonke ababhexeshi ugqithiso.
Ezi yamasango abaxhasayo hayi kuphela ombane aphezulu zokuhambisa umbane, kodwa ke ezisetyenziswa kunye fibre optic (OPGW - iingcingo emhlabeni optical) kunye ADSS (zonke-Heating self-inkxaso), kuquka iintonga eyenziweyo. Olu lwazi kubonisiwe fibre optic unikezelo kwindawo site yethu web.
Le yamasango ukunqunyanyiswa ukukhusela intambo xa imithwalo ufakelo, ukulawula kwisindululo isikhundla umqhubi umoya kunye oscillation, ukungcangcazela, yaye hunguta ntshikilelo zombane. Ukukhutshwa lomthwalo echaziweyo ilawulwa kukubamba na yezihlunu, leyo ncam apha naphaya ukuze ukumelana amandla elifunekayo ombane aphezulu zombane intambo zasemoyeni.
Indibano ukumiswa ombane aphezulu zingafundiswa kunye isokethi ngeliso, ipali kufanelekile, u-clevis, socket clevis ngokwemfuneko yoMthengi.
Uqinisa ukumiswa ezisetyenziswayo apho esinokubakho imithwalo eguquguqukayo enkulu. Khombo uyilo CUPS: abantu bayibonile, kwaye izinto eziphakamileyo amandla ukunciphisa ingozi yomonakalo umgca zombane.
ombane aphezulu yamasango ukunqunyanyiswa zenziwa
* Dip hot iqaqanjiswa kufa intsimbi casted
Isibulali - dip kwalenza ngentsimbi eshushu
ombane aphezulu ukumiswa izincedisi kudlule nokumelana, lobushushu ibhayisikile kunye iimvavanyo nokuguga.
Aluminium walutshixa Strain ngocingo
Ukungakhululeki uqinisa R.-85
Casted Iron walutshixa Uhlobo Strain ngocingo